सुरेन्द्र पाण्डेले गर्न थाले प्रचण्ड-माधव पक्षको महासचिवको काम
वीरेन्द्र ओली बुधबार, माघ १४, २०७७, ०७:४५
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टी महासचिवको टुंगो लगाउन नसकेको भनेर केही दिन पहिले खुबै चर्चा भयो। महासचिवका आकांक्षी धेरै रहेको र पद व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको भनेर प्रचण्ड–माधव पक्षको सार्वजनिक रुपमा आलोचना पनि भयो। अध्यक्षमा प्रचण्ड र माधव तथा प्रवक्तामा नारायणकाजी श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भए पनि महासचिवको विषय भने एक महिना पुग्दासम्म पनि टुंगो लागेको छैन।
यस बीचमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई हटाएको घोषणा गर्‍यो। पछिल्लो समय नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षको महासचिवको रुपमा काम गर्न थालेका छन्।
प्रचण्ड–माधव पक्षको महासचिवले गर्नुपर्ने संगठनका सबैजसो कामदेखि डकुमेन्टेसनसम्मको कामसमेत पाण्डेले नै गर्दै आएको अध्यक्ष माधवकुमार नेपालनिकट एक नेताले बताए। ‘भित्री रुपमा महासचिवमा सुरेन्द्र कमरेड नै हुनुहुन्छ। उहाँले महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ’, ती नेताले भने, ‘तत्काल महासचिव पद टुंगो लगाए जनपरिचालन लगायत अन्य विरोध कार्यक्रममा असर पर्ने भएकाले पछि टुंगो लगाउनेगरी स्थगित गरेका हांै।’
प्रचण्ड–माधव पक्षले तत्काल महासचिवको पद टुंगो लगाउनेगरी गृहकार्य पनि अघि बढाउने ती नेताले बताए। तर पाण्डेले आफूले अघोषित रुपमा महासचिवको जिम्मेवारी बहन गरिरहेको विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। ‘यस्तो विषय मलाई सोध्ने होइन। पार्टीका नेताहरुलाई सोध्नूस् न, के जवाफ दिनुहुन्छ’, पाण्डेले नेपाल लाइभसँग भने, ‘महासचिवको पदबारे मलाई जानकारी छैन।’
अध्यक्ष प्रचण्डनिकट स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने पार्टी महासचिव कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रवेश नै नगरेको दाबी गरे। प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने विषयमै आन्दोलन जारी रहेकाले महासचिवको विषय टुंग्याउन नभ्याएको पौडेलले बताए। ‘पार्टी महासचिवमा धेरैले आकांक्षा देखाउनु भएको छ। त्यो विषयमा छलफल नै भएको छैन’, पौडेलले भने, ‘सांगठनिक एकता टुंगो लगाउने बेलामा महासचिव पद पनि सचिवालय बैठकबाट टुंगिन्छ होला।’
पाण्डेले तत्कालीन एमालेमा लामो समय वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालनिकट भई काम गरेका थिए। एमालेको नवौं महाधिवेशनमा खनाल नेतृत्व तहमा सक्रिय नभएपछि पाण्डे माधवकुमार नेपालको समूहबाट महासचिव पदका उम्मेदवार बनेका थिए। तर महासचिव पदमा उनी ईश्वर पोखरेलसँग १३ मतको अन्तरले पराजित भएका थिए।
महासचिवमा पराजित भएपछि पाण्डेले स्थायी कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी पाए। तत्कालीन एमाले र माओवादी बीचको एकतापछि गठन भएको नेकपामा भने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको इच्छामा पोखरेलको साटो विष्णुप्रसाद पौडेललाई महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो। पौडेललाई महासचिव बनाएको भनेर पोखरेलले असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए। पोखरेल र पौडेल दुवै ओली समूहका नेता भएकाले उनको असन्तुष्टि त्यत्तिकै सामसुम बन्यो।
सुरेन्द्र पाण्डे माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री बनेका थिए। अर्थमन्त्रीका रुपमा तुलनात्मक रुपमा राम्रो छवि बनाएका उनी त्यसयता मन्त्री भएका छैनन्। २०५१ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका र २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका उनी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा र २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने लगातार निर्वाचित भए।
दावी छाड्लान् त अरुले?
प्रचण्ड–माधव पक्षको पहिलो बैठकका रुपमा हेरिने पुस ७ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पाण्डेसहित भीम रावल र जनार्दन शर्माको नाम महासचिवका रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यो बैठकमा एक मत नभएपछि महासचिवको नाम टुंगो लाग्न सकेन। महासचिव आफू बन्नुपर्ने भन्दै शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेको एक नेता बताउँछन्।
प्रचण्ड–माधव पक्षको महासचिव पूर्वमाओवादी समूहकै हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका शर्माले शक्ति सन्तुलनका हिसाबले समेत महासचिव आफू हुनुपर्ने लबिइङ गरिरहेका छन्। तर प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि महासचिव पूर्वमाओवादी समूहबाट बनाउन नहुने भन्दै पूर्वएमाले समूहले असहमति जनाएको छ।
तत्कालीन एमालेमा यसअघि नै उपाध्यक्ष भइसकेका भीम रावलले पनि महासचिवको दावी छाडेका छैनन्। एकीकृत पार्टीमा रावलले आफूलाई सचिवालय सदस्य बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सचिवालय सदस्य नभएकाले भौगोलिक रुपमा समेट्नुपर्ने आवाज उनले उठाएका थिए। रावलले उठाएको माग भने पार्टीमा सुनुवाइ नभएपछि त्यसबेला त्यत्तिकै सामसुम बनेको थियो। अहिले प्रचण्ड–माधव पक्षमा महासचिव पद रिक्त भएपछि रावलले आफ्नो दावी निरन्तर राखिरहेका छन्।
नेकपा राजनीतिक रुपमा दुई पार्टी बनिसके पनि कानुनी रुपमा भने एउटै पार्टीको अस्तित्वमा छ। निर्वाचन आयोगले पनि अहिलेसम्म नेकपाको विभाजनलाई स्वीकार गरेको छैन। यही शैलीमा ओली पक्षले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाउनुका साथै नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अरु सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी नेताको जिम्मेवारी यथावत राखिएको छ।
त्यस्तै, प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको छ। अरु सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका नेताको जिम्मेवारी यथावत छ।
महासचिव पौडेल ओली पक्षमा लागेपछि पाण्डेले महासचिवकै भूमिका निर्वाह गर्न थालेका हुन्। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको नेतृत्व तहमा भने दुवै पक्षले आ–आफ्नो अनुकुल फेरबदल गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी
‘विप्लव’ले किन रोजे ओलीसँगै सहकार्य?
‘नाटकीय सहमति’पछि ‘विप्लव’को पदार्पण
सर्वोच्चको फैसलापछिका ५ अन्योल ३४ महिनाअघि नै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि धेरै राजनीतिक घटनाक्रम विकास भइसकेका थिए। तर, अदालतको फैसलाले राजनीतिक... सोमबार, फागुन २४, २०७७